Abaphathi be-Apple 8 bafumana ngaphezulu kwezigidi ezili-13 kwizabelo | Ndisuka mac
Isibhozo sabaphathi abaphambili be-Apple ekuqaleni kwale nyanga ka-Epreli bafumene izabelo ezimbalwa ezithintelweyo kubasebenzi beenkampani, exabisa malunga nezigidi ezili-13 zeedola ubuncinci kuzo.
NgokweKhomishini Yokhuseleko eMelika, ezi ntshukumo ziyinxalenye yesicwangciso senkuthazo kwinkampani yaseCalifornia. Abamkeliyo, phakathi kwabanye, nguSekela Mongameli uEddy Cue noCraig Federighi. Kuyamangalisa ukungaboni uTim Cook phakathi kwabo, kodwa kuyacaca ukuba umphathi weCupertino khange angene kule phakheji yenkuthazo, eyenzelwe abaphathi bendawo nganye ecwangcisiweyo yenkampani.
Abaxhamli bayaziwa ngokubanzi kuluntu lwaseApple. Zezi:
UJeff Williams, IGosa eliyiNtloko lokuSebenza le-Apple,
UBruce sewell, I-SPV kunye noMcebisi Jikelele,
Phil Schiller, Usekela-Mongameli weNtengiso yeHlabathi,
UEddy cue, Usekela-Mongameli weSoftware kunye neeNkonzo ze-Intanethi,
UCraig Federighi, Usekela-Mongameli wezoBunjineli beSoftware,
UDan Riccio, Usekela-Mongameli wezoBunjineli beHardware,
ngexabiso elipheleleyo leeyunithi ze-94.010 zezabelo. Ngelo xesha, izabelo zazixabisa malunga ne-13.6 yezigidi zeedola. Ukongeza, uLuca Maestri (iGosa eliyiNtloko lezeziMali) kunye no-Angela Ahrendts (Apple Vice-President of Retail) nabo bafumana amabhaso ngomsebenzi wabo oxabisa malunga ne- $ 6 yezigidi. Ngale ndlela, uCue uphinde wathenga izabelo eziqhelekileyo ezingama-236 ze-Apple ekuqaleni konyaka, phantsi kwesiCwangciso sokuThengwa kweMpahla yabasebenzi (i-ESPP) yenkampani esekwe eCupertino.
La mabhaso njengezabelo Beza emva kokuphulukana neebhonasi ekujoliswe kuzo kunyaka ophelileyo ngenxa yeziphumo ezibi zemali eziye zafunyanwa ngo-2016. Ngaphandle kwento yokuba iApple ifumene inzuzo nge-215.6 yezigidi zeedola kwintengiso, ukusebenza bekungekho nto ibilindelwe, ibekwe yikomiti yembuyekezo yenkampani, ngenxa yoko ezi bhonasi azizange zisasazwe ekugqibeleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Abaphathi be-Apple bafumana ngaphezulu kwezabelo ezili-8 lezigidi